Xiriirka Belgium oo ay dhici karto inay FIFA ku dacweeyaan Radja Nainggolan! (Maxaa khaldamay?) – Gool FM
(Brusells) 09 Okt 2016 – Radja Nainggolan ayay dhici kartaa in laga hor istaago inuu ka qayb qaato kulanka Roma vs Napoli ee Derby della Sole.
Laacibkan khadka dhexe ayay dhici kartaa in dacwad laga gudbiyo si ay FIFA usoo fara geliso iyadoo lagu haysto inuu dhaawac dartii uga cudur daartay kulankii uu dalkiisa Belgium kaga horjeedey Bosnia, isagoo muruqa ka sheeganaya, balse waxaa lasoo sheegay inuu saftay kulan sxbtinimo oo ay la ciyaareen da’yarta kooxda ee Primavera-ka.
Haddii ay Belgium arrintan uga ashtakooto FIFA waxay taasi keeni kartaa in Nainggolan laga fariisiyo kulanka soo socda ee ay kaga horjeedaan kooxda kaalinta 2-aad ku jirta ee Napoli.
Laacibkii hore ee kooxda Cagliari ayaa arrinta sii qasay kaddib markii uu Twitter soo dhigay farriin u akhrismaysay: “Si buuxda uma faya qabin, sida ugu wanaagsan ee aan usoo kaban karo waa inaan ciyaaro kulan aan rasmi ahayn.”
Warsidaha Corriere dello Sport ayaa ku kalsoon in Roma ay si diblomaasiyadeed wax ula dhamaysan karto xiriirka Belgium, waloow ay arrin kale oo kacsani ka dhex jirto laba dhinac maaddaama ay sheeladii isboorti ee Thomas Vermaelen ay kasii dartay kaddib markii uu ku biiray xulka Belgium.
GOOGOOSKA: Albania vs Spain 0-2 (Spain oo Albania ka itaal roonaatay)